Izixhobo zokukhanyisa zangaphandle ze-Canopy 75W China Manufacturer
Inkcazo:I-Led Canopy Ukukhanyisa iipetroli zeGesi,Izibane zemizila yeGesi Station,Amalungiselelo okukhanyisa ngaphandle
Home > Imveliso > Ukukhanya kwe-LED ye-Canopy > 60w Led Canopy Light > Izixhobo zokukhanyisa zangaphandle ze-Canopy 75W
I-75w yethu yee- Canopy Lighting iifayili zeGesi Inika i-9000 Lumens kwi-5000K yoMkhanya oMnyama. Izibane zemizila yeGesi Station zifana neengelosi zikhanya phezu kwakho.
Ukunciphisa i-bill yakho ye-elektroniki ukuya kwi-84%, i-250W ye-HPS / HID esikhundleni sayo nge-75W ngaphandle kwe-Canopy Lighting Fixtures . Ukulinda kwexesha lama-50 000 iiyure-kathathu ngokukhawuleza njengoko izilungiso ze-MH, le ndoda yokukhanyisa i-kitopy kit iyanciphisa ukulungiswa kweendleko kunye nesidingo sokutshintshwa. Umbane ophantsi kombane iza neqonga elikhuphayo elingafakwa kwiJ-bhokisi ngokulula.
Ukukhanyisa kwangaphandle kwendiza lukhulu ngokukhanyisa ukukhusela, ukukhanyisa igaraji lokukhanyisa, ukukhanyisa izikhululo zegesi, ukukhanya kwendawo yokugcina impahla, ukukhanyisa i-drive, ukukhanyisa izixhobo, izitishi zezitimela kunye neendlela zokuhamba.
I-Canopy Lighting Fixtures 50W Qhagamshelana Ngoku
I-Led Canopy Ukukhanyisa iipetroli zeGesi Izibane zemizila yeGesi Station Amalungiselelo okukhanyisa ngaphandle I-Led Canopy Light Retrofit Kit 150w 200w Led Shop Ukukhanyisa Izibane zokuLungisa izithuthi zeGesi 100w Led Canopy Retrofit 150w Ukukhanya kweSitrato eSolari eNigeria